Aragtida Dhagaystaha: Qaybta Dhagaystayaasha Sirdoonka iyo Falanqaynta Software | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 23, 2021 Khamiista, Diseembar 23, 2021 Douglas Karr
Istaraatiijiyad muhiim ah iyo caqabad marka la horumarinayo oo la suuqgeyneynayo astaanta waa fahamka cidda suuqaadu tahay. Suuqgeeyayaasha waaweyni waxay iska ilaaliyaan jirrabaadda male-awaalka sababtoo ah inta badan waxaan u eexnay habkayaga. Sheekooyinka lama filaanka ah ee ka imanaya go'aan-gaadhayaasha gudaha ee xidhiidhka la leh suuqooda inta badan ma daaha ka qaadaan aragtida guud ee dhegaystayaasheena waa dhawr sababood:
Rajada ugu qaylada badan ama macaamiishu daruuri ma aha celceliska ama rajada ugu wanaagsan ama macaamiisha.
Iyadoo shirkadu ay yeelan karto saldhig macmiil oo muhiim ah, macnaheedu maaha inay leedahay saldhigga saxda ah ee macmiilka.
Qaybaha qaar waa la iska indhatiray sababtoo ah way yar yihiin, laakiin maaha inay noqdaan sababtoo ah waxay heli karaan soo celinta ugu sareysa ee maalgashiga suuq-geynta.
Xogta bulshadu waa macdanta dahabka ah ee daaha ka qaadida daawadayaasha iyo qaybaha sababtoo ah hodanka, xogta tirada badan ee la heli karo. Barashada mishiinada iyo awooda lagu farsameeyo xogtaasi waxa ay awood u siinaysa aaladaha in ay si caqli gal ah u gartaan qaybaha dhagaystayaasha oo ay falanqeeyaan dabeecadaha, iyaga oo siinaya aragtiyo la taaban karo oo ay suuqgeynayaashu u isticmaali karaan in ay si fiican u beegsadaan, shakhsiyeeyaan, oo ay ku gaadhaan natiijooyin sare.
Waa maxay Sirdoonka Dhageyste?
Sirdoonka Dhageystayaasha waa awoodda fahamka daawadayaasha oo ku salaysan falanqaynta xogta shakhsi ahaaneed iyo tan guud ee ku saabsan macaamiisha. Sirdoonka Dhageystayaasha Aaladaha waxay bixiyaan aragtiyo ku saabsan qaybaha ama bulshooyinka qaabeeya dhagaystayaashaas, cilmu-nafsiga dhegeystayaasha iyo tirakoobka iyadoo awood u leh inay ku xidhaan qaybaha dhagaystayaasha si ay u dhegaystaan ​​​​bulshada iyo goobaha falanqaynta, agabka suuq-geyneed ee saamaynta leh, goobaha xayaysiisyada dhijitaalka ah iyo suuqgeynta kale ama qolalka cilmi-baarista macaamiisha.
Insights Audiense Sirdoonka Dhageystayaasha
Audiense waxa ay ka caawisaa summadaha si ay u aqoonsadaan dhagaystayaasha ku haboon ee leh aragtiyo la taaban karo oo ka caawinaya in lagu wargeliyo xeeladaha lagu kobcinayo ganacsigaaga. Audiense Insights, waxaad awoodaa:
Aqoonso dhegaystayaal kasta ama qayb - Dhageystaha waxay kuu ogolaanaysaa inaad aqoonsato oo aad fahanto dhagayste kasta, iyada oo aan loo eegin sida ay u gaar tahay ama u gaar tahay in la sameeyo falanqaynta dhagaystayaasha bulshada. Si dadaal la'aan ah isugu dar xulashooyin badan oo kala shaandheyn ah markaad abuureyso warbixin, sida profile-ka isticmaalaha, affinities, demografiyada iyo doorarka shaqada, abuurista qaybo aad u gaar ah oo dhagaystayaal ah. Ku hubaysan Aragtida Audiense waxaad daaha ka qaadi kartaa sirdoonka dhagaystayaasha si aad u samayso go'aamo suuq-geyneed oo wanaagsan, la qabsato yoolkaaga, wanaajiso ku habboonaanta oo aad u kaxayso ololaha waxqabadka sare ee miisaanka.
Isla markiiba u fahan cidda ka kooban dhagaystayaasha aad beegsanayso - Aragtida Audiense khuseeya barashada mashiinka si aad isla markiiba u fahanto cidda ka kooban dhagaystayaasha aad beegsanayso, adoo falanqaynaya xidhiidhka ka dhexeeya dadka qaabeeya. Ka gudub qaybta dhaqanka ee ku salaysan da'da, jinsiga iyo goobta, hadda waxaad ogaan kartaa qaybo cusub oo ku salaysan danaha dadka iyo si qoto dheer u fahan suuqa aad la beegsanayso hadda. Qalabka sirta ee dhagaystayaashu waxay kuu ogolaaneysaa inaad isbarbardhigto qaybaha saldhigyada ama daawadayaasha kale oo aad abuurto bartilmaameedyo leh qaybo kala duwan, dalal ama xitaa tartamayaasha kale.
Lahso xogtaada – is dhexgal Aragtida Audiense xogtaada ama muuqaaladaada. Si fudud u dhoofi warbixinahaaga PDF or PowerPoint qaababka si aad u isticmaasho fikradaha ugu habboon ee ku saabsan dhagaystayaashaada sagxadahaaga bandhigga. Ama beddelkeeda, u dhoofi mid kasta oo ka mid ah fikradaha a CSV fayl garee si aad si fudud ugu habayn karto, u wadaagi karto ama ugu dhex dari karto ururkaaga.
Sida Loo Abuuro Warbixinta Caqliga Dhageystahaaga Bilaashka ah
Halkan waxaa ah muuqaal guud oo ku saabsan sida loo isticmaalo DhageystahaQorshaha xorta ah ee lagu abuurayo warbixinta Insights iyadoo la adeegsanayo saaxir abuurka aasaasiga ah ee dhagaystayaasha. Erayga ha u ogolaan aasaasiga ah nacasnimo, in kastoo. Warbixintu waxay bixisa tirakoobka, juqraafi, luqadda, noole, da'da, dhaqaale-bulsheed, affinities summada, saamaynta summada, danaha, xidhiidhka warbaahinta, nuxurka, shakhsiyadda, gadashada maskaxda, caadooyinka khadka, iyo qaybaha 3 ee ugu sarreeya!
Dhis Falanqaynta Aragtidaada Dhageystayaasha bilaashka ah
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Dhageystaha oo waxaan isticmaalayaa isku xirka maqaalkan.
Tags: falanqaynta dhagaystayaashagaraadka dhagaystayaashaaragtida dhagaystayaashafalanqaynta dhagaystayaasha brandcilmi baarista summadasirdoonka tartankafalanqaynta macaamiishaastaanta macaamiishafalanqaynta raacayaashakala qaybsanaanta raacdafalanqaynta influencerqaybintafalanqaynta daawadayaasha warbaahinta bulshadaprofile warbaahinta bulshada